पोर्चुगलको गोल बर्षा/उत्तर कोरिया ७-0 ले पराजित « नेपाली मुटु
« ब्राजिल दोस्रो चरणमा/काका खेल्नेछैनन् अर्को खेल
चिलीसँग स्विट्जरल्यान्ड पराजित »
पोर्चुगलको गोल बर्षा/उत्तर कोरिया ७-0 ले पराजित
Posted by नेपाली मुटु on June 21, 2010
खेल पनि रमाईलो हुन्छ । कहिलेकाही त खेल, खेल जस्तो नभएर असिना बर्सेको मौसम जस्तो हुन्छ । जस–जसले सोमबार भएको पोर्चुगल र उत्तर कोरिया बिचको खेल हेर्नु भयो पक्कै ठान्नु भयो होला, सक्ने भए उत्तर कोरियाली खेलाडीलाई छाता पु¥याईदिन पाए हुन्थ्यो भनेर । पहिलो हार्फसम्म त उत्तर कोरियाले ठिकै नै खेलिरहेको थियो । जब आधा समय पछि खेल सुरु भयो, पोर्चुगलका खेलाडीले के खाएर आए कुन्नी गोलको त बर्षा नै सुरु भयो । बिचरा कोरियन खेलाडीहरु न छाता खोज्न हिड्नु न त मैदानमै बसिरहनु एकदम अफ्ठ्यारोमा थिए । यो हारसँगै अर्काे चरणमा खेल्ने उत्तर कोरियाको सपनामा भोटे ताल्चा लागेको छ । उत्तर कोरियाका समर्थकहरु कुनामा छेलिएर गोल माथि गोल खाएको हेर्न नसकी रहेको बेला पोर्चुगलका समर्थकहरु भुभुजेला भन्दा चर्काे स्वरमा चिच्याएर उमंगीरहेका थिए । उनीहरुको यो खुसी साच्चै नै हेर्न लायकको थियो । तपाई पनि पोर्चुगलकै समर्थक हुनुहुन्छ ? तपाई चै के गर्दै हुनुहुन्छ ?
पोर्चुगलका समर्थकहरु जितको तरङ्गमा
खेलको २९ औं मिनेटमा राउल मिरेल्सले पोर्चुगलका लागि पहिलो खाता खोलेका थिए । खेलको पहिलो हाफसम्म उत्तरकोरिया एक गालले पछि परेपनि दोस्रो हाफमा दवावमा देखियो । दोस्रो हाफको सुरुआतसँगै सात मिनेटको अन्तरमा पोर्चुगलले तीन गोल गरेको थियो । उसकालागि ५३ औं मिनेटमा सीमाओ, ५६ औं मिनेटमा हूगो अल्मेडा, ६० औं र ८९ औं मिनेटमा टाइगो, ८१ औं मिनेटमा लेड्सन र ८८ औं मिनेटमा रोनाल्डोले लगातार गोल गरे ।
हारसँगै ४४ बर्षपछि विश्वकपमा सहभागिता जनाउँदै गरेको उत्तरकोरिया दोस्रो चरणमा नपुग्ने निश्चित भएको छ । अव समूह चरणको आफ्नो अन्तिम खेलमा आइभरी कोस्टविरुद्धको खेल उसकालागि औपचारिकमात्र हुने छ । समूहमा ६ अंकसहित ब्राजिल पहिलो स्थानमा रहेको छ भने दोस्रो स्थानमा रहेको पोर्चुगलको ४ तथा तेस्रो स्थानमा रहेको आइभरीकोस्टको एक अंक रहेको छ । पोर्चुगल र आइभरीकोस्टले पहिलो खेल गोल रहित बराबरीमा टुङ्याएका थिए । अव समूह चरणको अन्तिम खेलमा ब्राजिलले पोर्चुगल तथा आइभरीकोस्टले उत्तरकोरियाको सामना गर्ने छ ।
खेलको पुर्ण तथ्याकं यस्तो थियो :-
This entry was posted on June 21, 2010 at 10:12 pm	and is filed under विश्वकप बिशेष. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.